ငွေကုန် သက်သာစေတဲ့ အင်တာနက် သုံးနည်း - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းလမ်းများ > ငွေကုန် သက်သာစေတဲ့ အင်တာနက် သုံးနည်း
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 11:13 AM Android Tutorial, နည်းလမ်းများ
အင်တာနက်သုံးတဲ့အခါ ငွေကုန်မြန်တဲ့သူတွေအတွက် မလိုအပ်ပဲ ပိုက်ဆံ ဖြတ်မခံရစေဖို့ နည်းလမ်းတွေ ပြောပြပေးသွားပါ့မယ်။
၁. အဆင်ပြေမယ့် Internet Package တခုခု ၀ယ်သုံးပါ။
– facebook နဲ့ အသုံးများတဲ့သူတွေအတွက် ကတော့ ဘယ်လို Package မဆိုအဆင်ပြေစေပြီး အလုပ်ကိစ္စ များနဲ့ ဖုန်းကြာကြာ ပြောရမယ့်သူတွေကတော့ MPT ရဲ့ Daily Unlimited Voice Pack ဖြစ်တဲ့ *399# ကို ခေါ်ဆိုပြီး တစ်ရက်စာကို ၃၉၉ကျပ် နဲ့ရယူလိုက်ပါ။
– Viber Free အသုံးပြုချင်တဲ့သူတွေကတော့ Telenor ရဲ့ Seik Kyite Data Plan ကို ရယူနိုင်ပါတယ်။
– အားကစားသတင်း အနုပညာသတင်းကို အခမဲ့ ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Ooredoo ရဲ့ အင်တာနက် Package ကို ၀ယ်ပြီး Thadin Application ကို Download ရယူလိုက်ပါ။
၂. အိမ်မှာ Wi-fi ရှိရင် Connect လုပ်ပြီး အမြဲ On ထားပါ။ အိမ်ရောက်တဲ့အခါ Auto Connect ဖြစ်တော့ အဆင်ပြေစေမှာပါ
၃. Android Application မှန်သမျှကို ဖုန်း က Auto Update လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Setting > Auto Update Application ကိုပိတ်ထားပါ။ တခြား ဖုန်း Application တွေကို ပါ update လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Setting > Security > Unknown Sources ကို On ထားပါ။
၄. Youtube မှာ Video ကြည့်ရင် ငွေပိုဖြတ်တာကြောင့် Facebook က အခမဲ့ ကြည့်လို့ရတဲ့ Entertainment Page တွေLike လုပ်
၅. ဖုန်းမှာ GPS ကို ပိတ်ထားပေးပါ။ GPS ဖွင့်ထားရင်လည်း ပိုက်ဆံ ဖြတ်တတ်ပါတယ်။
၆. ဖုန်းမှာ Email ဖွင့်တဲ့အခါ နာရီဝက် တခါ Update မတက်စေချင်ရင် Setting မှာ Manual Update လုပ်ထားပါ။
၇. ဖုန်း Wifi နဲ့ ကွန်ပျူတာသုံးပြီး Website တွေ ကြည့်တဲ့အခါ ငွေပိုဖြတ်တတ်တာကြောင့် သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာရှာတဲ့ Website ကိုMobile Version နဲ့ ကြည့်တာပိုသက်သာပါတယ်။
၈. အင်တာနက် သုံးပြီးတဲ့ အခါ ပိတ်ဖို့မေ့တတ်ရင်တော့ Setting > Data Usage မှာ Limit လုပ်ထားပါ။
Data Usage ရှာနည်းကို မသိတဲ့ သူတွေ အတွက် ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
OnePlus – Setting > Wireless & Networks > Data Usage တို့ဖြစ်ပြီး ဒါကတော့ မတူတဲ့ ဖုန်း အမျိုးအစားတွေ မှာ မြင်ရတဲ့ပုံစံ တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
အငျတာနကျသုံးတဲ့အခါ ငှကေုနျမွနျတဲ့သူတှအေတှကျ မလိုအပျပဲ ပိုကျဆံ ဖွတျမခံရစဖေို့ နညျးလမျးတှေ ပွောပွပေးသှားပါ့မယျ။
၁. အဆငျပွမေယျ့ Internet Package တခုခု ဝယျသုံးပါ။
– facebook နဲ့ အသုံးမြားတဲ့သူတှအေတှကျ ကတော့ ဘယျလို Package မဆိုအဆငျပွစေပွေီး အလုပျကိစ်စ မြားနဲ့ ဖုနျးကွာကွာ ပွောရမယျ့သူတှကေတော့ MPT ရဲ့ Daily Unlimited Voice Pack ဖွဈတဲ့ *399# ကို ချေါဆိုပွီး တဈရကျစာကို ၃၉၉ကပျြ နဲ့ရယူလိုကျပါ။
– Viber Free အသုံးပွုခငျြတဲ့သူတှကေတော့ Telenor ရဲ့ Seik Kyite Data Plan ကို ရယူနိုငျပါတယျ။
– အားကစားသတငျး အနုပညာသတငျးကို အခမဲ့ ဖတျခငျြတယျဆိုရငျတော့ Ooredoo ရဲ့ အငျတာနကျ Package ကို ဝယျပွီး Thadin Application ကို Download ရယူလိုကျပါ။
၂. အိမျမှာ Wi-fi ရှိရငျ Connect လုပျပွီး အမွဲ On ထားပါ။ အိမျရောကျတဲ့အခါ Auto Connect ဖွဈတော့ အဆငျပွစေမှောပါ
၃. Android Application မှနျသမြှကို ဖုနျး က Auto Update လုပျနတေယျဆိုရငျတော့ Setting > Auto Update Application ကိုပိတျထားပါ။ တခွား ဖုနျး Application တှကေို ပါ update လုပျနတေယျဆိုရငျတော့ Setting > Security > Unknown Sources ကို On ထားပါ။
၄. Youtube မှာ Video ကွညျ့ရငျ ငှပေိုဖွတျတာကွောငျ့ Facebook က အခမဲ့ ကွညျ့လို့ရတဲ့ Entertainment Page တှေLike လုပျ
၅. ဖုနျးမှာ GPS ကို ပိတျထားပေးပါ။ GPS ဖှငျ့ထားရငျလညျး ပိုကျဆံ ဖွတျတတျပါတယျ။
၆. ဖုနျးမှာ Email ဖှငျ့တဲ့အခါ နာရီဝကျ တခါ Update မတကျစခေငျြရငျ Setting မှာ Manual Update လုပျထားပါ။
၇. ဖုနျး Wifi နဲ့ ကှနျပြူတာသုံးပွီး Website တှေ ကွညျ့တဲ့အခါ ငှပေိုဖွတျတတျတာကွောငျ့ သိခငျြတဲ့ အကွောငျးအရာရှာတဲ့ Website ကိုMobile Version နဲ့ ကွညျ့တာပိုသကျသာပါတယျ။
၈. အငျတာနကျ သုံးပွီးတဲ့ အခါ ပိတျဖို့မတေ့တျရငျတော့ Setting > Data Usage မှာ Limit လုပျထားပါ။
Data Usage ရှာနညျးကို မသိတဲ့ သူတှေ အတှကျ ဖျောပွပေးထားပါတယျ။
OnePlus – Setting > Wireless & Networks > Data Usage တို့ဖွဈပွီး ဒါကတော့ မတူတဲ့ ဖုနျး အမြိုးအစားတှေ မှာ မွငျရတဲ့ပုံစံ တှပေဲဖွဈပါတယျ။
ငွေကုန် သက်သာစေတဲ့ အင်တာနက် သုံးနည်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 11:13 AM Rating:5အင်တာနက်သုံးတဲ့အခါ ငွေကုန်မြန်တဲ့သူတွေအတွက် မလိုအပ်ပဲ ပိုက်ဆံ ဖြတ်မခံရစေဖို့ နည်းလမ်းတွေ ပြောပြပေးသွားပါ့မယ်။ ၁. အဆင်ပြေမယ့် Internet ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 11:13 AM